In the end... - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Miskiin-Macruuf-Aqiyaar, October 8, 2018 in Politics
...after 27 years of non-stop zombie marqaamid by dying secessionists, the realization dawned on an official secessionist. Welcome back to reality, Edna Aaden.
SOMALILAND oo shaacisay suuragal nimada ah inay la midooban SOOMAALIYA
Maamulka Somaliland ayaa daaboolka ka qaaday inay diyaar u yihiin wadahadal iyo midow ay la yeeshan Soomaaliya inteeda kale.
Maamulka Somaliland ayaa sheegay in aysan caqabad ku aheyn midowga Soomaaliweyn hase yeeshee ay doonayan in marka hore ay hubiyaan in Soomaaliya ay diyaar u tahay midnimada.
Haweeneyda lagu magacaabo Adna Aadan Ismaaciil oo ah Ergeyga Somaliland u qaabilsan wadahadalka dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay suuragal tahay in ay dib u midooban labada dhinac.
Adna Aadan waxa ay sheegtay in midowga labada dhan uu ku imaankaro keliya in Soomaliya ay marka hore diyaar u tahay in la dhowro nidaamka dowladnimo, maadaama ay Soomaaliya ka jiraan sharciyo kala duwan.
Iyadoo u warameysay Idaacada VOA laanteeda Afka Soomaaliga ayey tiri, “Somaliland diyaar ayey u tahay inay la midowdo Soomaaliya inteeda kale waa haddii laga helo Soomaaliya shuruudaha, waayo labada dhanba waxa ay doonayaan nabad”
“Midowga labada dhinac waxa uu yahay mid ku xiran in Soomaaliya marka hore ay hesho dowlad dhameystiran oo ay soo doortan shacabka”
Adna ayaa sheegtay in Somaliland ay ka tanaasuli karto gooni isu taagga haddii Soomaaliya inteeda kale ay ka dhalato dowlad ay shacabka doortan islamarkaana garawshiyo ka bixiso tabashada Somaliland.
Adna waxa ay carab dhabtay in Somaliland aysan caqabad ku aheyn wadahadalka labada dhinac, waxa ayna taa bedelkeeda sheegtay inay aad usoo dhaweynayaan wadahadal iyo midow dhexmara labada jiho.
Dowladaha Holland iyo Denmark ayaa dhawaan bilaabay dadaalo ay wadahadal iyo midow uga dhex abuurayan Soomaaliya iyo maamulka Somaliland oo ka gadoodsan Soomaaliya inteeda kale.
Danjirayaasha labada dal ee ka howlgala Kenya ayaa horaantii asbuucii tagay wadahadal la yeeshay mas’uuliyiin ka kala socda labada dhinac waxaana lagu wadaa in Somaliland ay muujiso tanaasul.
Dhinaca kale, wadahadallada Dowladda Federaalka iyo maamulka Somaliland ayaa lagu wadaa in dhawaan ay ka bilowdaan magaalada Nairobi ee xarunta Dalka Kenya.
Dariishadihii, iridihii iyo cirkii laga soo xiray is already bringing results dowladda dhexe wanted.
U malaynmayo inad fahantay waxanu wa diplomatic talk Somali and iyo Somali a 1960 before the midow bay kala tageen. In 1991 waba lasii aasay midowgi beenowbay 1960 kowda July. By there is no such thing as dowlada dhexe the amisom bunker is cornerd. And alshabaab governs much of south central Somalia. Wax dowlad xamar layidha kajirta majirto wa Wax la nabnabay oo maqaarsaar ah.
It is good the khat delusions are getting less.
Wada hadalku waa inuu noqdaa aragtidayda see dalkeena iyo dadkeena u badbaadinaa anagoo isku duuban isugu tanaasulaa midawgeenii boorka uga jafnaa iwm
Laakiin hadday sidii ay caanka ku ahaayeen la yimaadaan haloo wada hadlo somaliya iyo somalilnd ingiriiskuna goob joog ha ahaado wax macno ah ma keenayso sababtoo ah lixdankii yaa lagu heshiiyay midow iyo midnimo
Hadday wax ka tirsanayaan dawladdii kacaanka 90 kii bay tagtay dalka
Waxa wax ka dhaxmarayo waa jiil cusub iyo nadaam ka duwan kii kacaanka
Waxaa igu cusub oo qudha dadku badankiisu isma diidana inay midoobaan oo ay noqdaan qarran qurux badan oo ka iftiima geeska afrika
Waxa nagu cusub waa snm qaybihii ugu mayalka adkaa oo masaajidka usoo dhawaanaya.
1960 26 june ayanu anagu xoriyad qaadanahay dhaqaniyan. Iyo xeeriyan dad aad ukala duwan baynu nahay markat dhaqan iyo xeer iyo taarikh iyo sooyaal. Markay noqoto dad isku qaldamay banu ahayn. Waki mujahiid xassan kayd walanwal marki baqaladki arkay. Dowadi adancadde iskaallrighr bay ahayd iyo ti abdirashid sharmarke. Dowladi xaraanta ku qabsatay dalka aya wadanka halka dhigtay markay reerkinu kala garanwaayeen waxan wa hanti qaran. Waxan heblaayo diini ba leh. Markad xoolaa reerkinu iyo taqaranka isku qaladiid dhib farabadan badhaca. Waki marki dambe mujahid maxammad cali idinka iyo wslftina beeleysan qoorta uyarey deedna anu SNM samaysana oo anu ina maxammad guleed Gudoomiye kadhiganay. Somaliland iyo Somalia oomidooba waxa kadhow neytanyahu oo ashahaata ama falastiin oo falsafada zionism qaadata.
Somaliland iyo Somalia oomidooba waxa kadhow neytanyahu oo ashahaata ama falastiin oo falsafada zionism qaadata.
Haloogu dhaarto midkaas in uu yahay ka aanu ka duuleyno, ambadkan isa soo urarsatey ee halkan SOL ah jooga ee moodaya "hadal-qurux-badan" oo lagu yidhi gabadh VOA joogta oo loola jeeda in aan lagu odhan wax aad tahay mid ama nin macangag ah, in ay tahay "runta-siyaasadeed" ee aanu "wadar-ahaan-u-weegaaraney".
Tusaale ahaan, waligeed lagama maqal Mr Netanyahu of Israel nabad qaadan maayo oo falastiin la heshiin maayo. Ama dhul u celin maayo oo wax "hadal-qaawan" oo "diir-siiban" lagama qorin afkiisa.
Haddana waa ognahay, ama cid kastaa waa ogtahay in ay ka dhowdahay isaga oo Muslim noqda in uu dhul falastiin u celiyo.
Markaa, "ambadkan siyaasadda" ah ee aan gareynin "af-gobaadsiga", "dhool-wada-qayaxan" ama "fool-cadeyn" sida ay uga duwan tahay waxa "biyo-kama-dhibcaanka-ah" ah ee aan ka duuleyney ilaa iyo 1961, haysku madadaaliyaan Somaliland ayaa dib ula madoobeysa Somalia.
Waana hadal aan kasii weyneyn nin daad qaadey xumbo cuskey.
Aderkaa Afweyne oo dib-usoo-noolaada ayaa ka dhow in ay Somaliland noqodo dhul aad adiga iyo inta kula tolka ah ee "Ilka-Yar-Ilma-Faqash" ay xaq "muwaadinimo" ah ku yeeshaan oo aaney noqon "laajiyiin-soo-lumey" marka ay Somaliland dhex-joogaan.
Tan anaa kuu hubo'e haku karaamo seegin, naxli-faqashow.
Turjubaan hala doono?
Inaadeer, nimankan, qadaadweynta dhibaatadda heysataa waxa weeye soddon (30) sanno ayaanu wada joogney oo aanu qaran wada laheyn, walina namey baran. Oo may baran reer Waqooyi siduu u doodo. Sida ay canaanta isugu qali celiyaan. Sida hadalka nuxurkiisa loogala soo bixi karo aaraar dheer, oo hor-dhac leh, oo dhex-taal leh, iyo gunaanad leh. Sida jikaarku marna u yahay mid aqli-buuxin ah, marna uu u yahay mid gacmo-daalis ah.
Intaa oo hadal loo dhigi karo, oo weedh ah, oo ummaddi kukala bogsato ma garanayaan.
Kuwa hadda cusub ee "car-carta" qabta ee "M-Ooryaan-caruur-cago-weyn-ahna-noqdayna" (hadaan ku soo halqabsado eraygaagii ahaa "caruur-cago-weyn" ee aad i tidhi) maba garanayaan waxaas oo ummad-dhaqankeed ah.
Oo iyaga adeerkood iyo abtigood oo "tuuganimo" uwada shaqo taga ayey garaadsadeen. Oo markaa hadal nuxurkiisa maba garan karaan. Gartii "Ina-Sanweyne" loo geyn jireyna, warkeeda daa oo maba sheed-garanayaan.
Taas-na waxa aan u leeyahay, ninkan xildhibaanka ah waa nin mucaarad ah, sida aan hadalkiisa ka dhadhan sanayo. Waana doodiisii oo uu leeyahay waxbaa khaldan. Oo isagu malaha tayda oo qudha ayaa sax ah ee dalku sidaas hayeelo. Waxaase uu leeyahay sidan ayey ila tahay ee aanu u talo-badsano.
Sidaa-daraateed, doodiisu, nuxurkeedu, mar waa mudici iyo xildhibaan dowladda dacar ka shubaya. Mar-na waa nin figradiisa cabirey. Mar-na waa nin leh sidaa ayey iila muuqataa oo dood jikaar ah lasoo geed-fadhiya. Mar-na waa nin aaminsan in wixii khaldamey oo ah sida ay isaga latahay dib loogu saxo siduu isagu qabo oo kaliya.
Intaas oo jeer oo "isku-hoos-jira" ayey doodiisu u fur-furmeysaa, marka nuxur-ahaan la tafsiiro. Sidaas oo tahay-na, isagu, mar-na ma aaminsanna in isagu yahay kii ugu dambeysta talada dalku ku gowracan yahay ay kasoo oofeyso.
Wakaa nuxurkii doodiisu ee shantaa (5) daqiiqo aheyd ee ninkaasi hadley ku jirtey. Laakiin, haka filan, "M-Ooryaantan-Cago-weynaatey", in ay sinaba u fahmaan dhaqankaas hadalka iyo aaraarta ah ee ninkaasu ku hadley.
Iyaga waxa ay la tahay nin baa yidhi sidaas, sidaas-daraateed, taasu waa runta meesha taala. Oo ismaba weydiinayaan in ninka xildhibaanka ah ee sidaa qaba in dadku ay sidaas la qabaan? Ama wax uu aaaminsan yahay uu xataa yahay wax ay xaaskiisa iyo gurigiisu uu la aaminsan yahay? Cid kaleba hakuu dambeyse'e.
Oo isma weydiinayaan in ninkaasi waxa uu qabo uu yahay waxa dhabta ah ee "biyo-kama-dhibcaanka" ah ee ka turjamiya xaqiiqta sida dadka intiisa badani ay u arkaan?
Runtii, nimankan qadaadweynta af-Soomaaliga sida aanu ugu hadalno iyo sida "bahdilan" ee ay ugu hadlaan waa laba aad u kala-fog. Taasina waa sababta aanu isu fahmi la nahay ilaa iyo maanta. Wax kaleba haba kuu dambeeyaane oo aanu dib-u-wadaagno.
"If there are people who think we are two separate, they don't know us. We are one people and PM Abiy and I will work to the realization. From now on PM Abiy is the leader of these one people"
President Isayas of Eritrea in Addis Ababa.
22 minutes ago, Old_Observer said:
President Isayas of Eritrea in Addis Ababa
That Eritrean's strong-man he really is the sort of fellow who believes six different things before breakfast. And all depends his mood of the hour.
A Real born-hustler. A deeply cynical chancer of the sort who will order your murder and still will have the bare-cheek to arrive at your funeral with the biggest flower you could thing of and indeed cry his eyes out at the shoulder of your widow.
And for good measure will even "offer" to her to pay-off all of her debt along with the house mortgage, as part of his deeply and sincerely brotherly love he had for her late husband.
A Real born creature of the dark-side of humanity, indeed.
Garamgaram ha loo dulqaato waa nin xero xabashi kasoo toosa. Afkuna afkiisi maaha. Yaan laga cadhoon.
Odayaashu way ogyihiin in wuxuba qardajeex yihiin xaqiiqdana baal marsan yihiin, wixi dawladan farmaajo ka horeeyay waxay ku jireen riyo camiiq ah oo aad u dheer ama ay adkayd in la toosiyo.
Snm waxay kaliya oo ay ka doonaysaa wada hadalada ma'ahan aan heshiino ama aan kala tagno
Waxay aduunka ka iibinaysaa, badeeco dhacday ama in koofurtu tahay,dal, gooni ah oo dal kale dulmay, kuna kala hadla luuqadda ingiriiska iyo talyaaniga
Waxayna leeyihiin, waxaa loo baahan yahay si loo wada hadlo, in dawlado kale, miiska wada hadalka nala fadhiyaan,ayadoo waliba dal kale shirku ka dhacayo.
Aduunkuna uma jeedo jabhad hubaysan iyo dawlad la heshiisiyo.
Umana jeedo labo dal oo xuduud isku haysta.
Wuxuu u jeedaa dad markay roob waayaana caawimaad u baahan.
Markay roob helaana daawada kaneecada u baahan.
Muxuu yahay heshiiska ay caalamka ka doonayaan in la dhex dhigo koonfurta iyo waqooyiga?
Koonfurtu ma dukaan aqoonsiga lagu iibiyaa?
Gaalada ay aqoonsiga ka doonayaan maxay u aqoonsan waayeen sodon sano oo wax dawlada aysan ka jirin koonfurta?
Haddii koonfurtu dawlad xoog leh noqoto oo isku fillan ma yeelaysaa in dalka lakala gooyo?
Soo beesha caalamku dhib hor leh ma keenin?
May aqoonsadaan intaysan koonfurtu daciifnimada ka bixin oo waliba ayagu u taliyaan?
Waa su'aalo nin "caleen" hor taalo ama cirka fiirin dodon sano, inuu wali buluug yahay iyo in kale uusan ka lawaabi karin.
Usoo noqo arrimaheena hoose ee qabiilaysiga
Snm Soomaalida kalana waxay ka iibinayaan in usc iyo snm ku dulmanaayeen beel ahaan taliskii kacaanka ayagoo is watana ay ka guulaysteen 90'kii
Ok arrintaa qudheeda labo usii kala qaad.
Ma qabiilbaa wax dulmay? mise talis dawladeed? Hadiiba dulum jiro.
Tan qabiilka meesha kuma jirto oo qabiil waxba uma qabaan snm taa badelkeeda qaar ka mida bayba doonayaan inay taliskooda hoos geeyaan ayagoo isleh ku weellal badsada.
Tan dawladii hore waa arrinta siday uga been sheegayeen ay la caatoobeen.
Mar waxay ku sheegaan beel ay ka adkaadeen oo ay fqash ula baxeen.
Marna waa dawlad guun ah oo gumaysan jirtay oo ay xoriyad ka heleen 18kii may .
Waa qof markuu marqaamana wax kuu sheegaya
Markuu qaadiroodana wax kale kuu sheegaya.
Wada hadalkuna sidiisaba waa wakhti lumis aragtidayda, hadduusan ahayn midaan lagu dhex jirin oo looga hadlo wax wada qaybsiga awood qaybsiga, arimaha bulshada, gudniinka fircooniga ah, ka hortagga burcad badeedka, iyo shaqo abuurka-dhalinta.
Wax la iibsan karo ma'ahan dawladdii koonfur ka dhalataba waa cadawgeena waxayna ka turjutaa taliskii hore oo wax na dhex mareen ee caalamku hanaga furfuro.
Ina-Faqash ilka-yar, horey ayaan kuugu karbaashey aqliga foorara ee naxliga ah ee aad halkan kala tororog leedahay ee aad habeen-iyo-maalin ku heyso.
Laakiin, waxaad moodaa in aad tahay dhoohane si u dar-daran oo si u maqiiqan. Oo wax xiniinyo ahna aan loo ogeyn haddana hadal tiris haya. Sidaa daraateed, ereyo badan kugu khasaarin maayo, inta aan ka aheyn intan yar ee kooban.
Kow, nin fuley ah ee xiniinyo la'aantu heyso, xageyga Somaliland ah, gabadha la meheriyo ee boqolka laga bixiyo ayaa wax dheer. Oo iyada waxbaaba laga faa'iideyaa, oo rag ay kuu dhasho ayaadba ka sugi. Laakiin, nin dhufaanan oo fuley ah oo la xukuma sida adiga iyo tolkaa oo kale wax lagu habsaamo adna ma tihid wadar-na uma tihidin, saaxiib.
Laba, Somaliland ragii lahaa ee idiin dacareeyey ayaa ka taliya. Adeerkaa Afweyne oo kasoo xaadira Villa Somalia ayaa ka dhow hargeysa oo aad lug ku yeelato aayaheeda. Iskaba iloow in Ina Farmaajo oo ah nin "magan" ku ah "googarad badhi-dumar astureysa hoosteed", oo waliba ku darsoo ah nin "San-Bakhaarle-African-ahi" uu "M-Ooryaanta-dhiig-miiratada-ah" ah ka horjoogo, in uu wax ku yeesho siyaasadda dadkaas iyo dalkaas, Somaliland, lagu dhaqayo.
Saddex, arinta citiraafkana maha wax idinka idinku xidhan, ama Somalia si-guud ugu xidhan. Xataa maaha wax ku xidhan Africa ama Qaramadda Midoobey (UN). Ee waa wax dad kale ku xidhan.
Ee waxba haysku faanin in aad arintaas wax lug ah aad ku leedihin. Ama ay tahay wax ku xidhan wada-hadal Somaliland la gasho Somalia. Ee halkan ku sug inta aanu ragga aanu "dan-iyo-masaaliix-kala-iibsaneyno" arintu noo soo kala dhamaaneyso oo ay noo soo kala miirmeyso.